ट्विटर वेबमा कसरी मेरो खाता निस्क्रिय गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 383
Para वेबमा तपाईंको खाता निष्क्रिय गर्नुहोस्, ट्विटर प्रयोगकर्ता: तपाइँको पेरिस्कोप खातामा लग इन गर्न आवश्यक छ, तपाइँको प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र पप-अप मेनूबाट सेटि chooseहरू छनौट गर्नुहोस्, निष्क्रिय खातामा क्लिक गर्नुहोस्।
क्लिक गरेपछि खाता निष्क्रिय गर्नुहोस्, एक शास्त्रीय संवाद बक्स स्क्रिनमा देखा पर्दछ, ट्विटर प्रयोगकर्ताले खाताको निस्क्रियता पुष्टि गर्न खाता निस्क्रिय बनाउँदछ। प्रक्रिया समाप्त भएपछि, प्रयोगकर्तासँग उप्रान्त एक सक्रिय ट्विटर खाता छैन।
जब ट्विटर प्रयोगकर्ताले निष्क्रिय खाता चयन गर्दछ, उसलाई सोध्यो तपाइँको निर्णय को पुष्टिकरण निष्क्रिय गर्न। यदि तपाइँ व्यक्तिगत डेटा डाउनलोड गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, एक लोडिंग सूचक पप अप हुन्छ जब तपाइँको अनुरोध प्रक्रिया गरिएको छ; तपाईंको अनुरोध पूरा भयो र तपाईंको डाटाको साथ फाइल डाउनलोड गर्न सुरू गर्दछ।
मेरो पेरिस्कोप खाताबाट लग आउट गर्नुहोस्
यदि ट्विटर प्रयोगकर्ता उसले आफ्नो मोबाइल हरायो र तपाइँ तपाइँको पेरिस्कोप खाता बाट लग आउट गर्न आवश्यक छ; यस उद्देश्यका लागि तपाईले यो प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्नेछ: आईओएस वा एन्ड्रोइड उपकरणको साथ चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्; यदि तपाईं एक ट्विटर खाताको साथ पेरिस्कोपमा लग इन हुनुहुन्छ भने, तपाईंको पीसीमा ट्विटर सेटिंग्समा जानुहोस्।
रद्द गर्नुहोस् छनौट गर्नुहोस् पेरिस्कोपमा सम्बन्धित पहुँच; आईओएसको लागि ट्विटरमा पहुँच रद्द गर्नुहोस् वा एन्ड्रोइडको लागि ट्विटर, यो प्रयोगकर्तामा भएको उपकरणमा निर्भर गर्दछ। तपाईंको नयाँ मोबाइलमा पेरिस्कोप अनुप्रयोग डाउनलोड गरेपछि, तपाईंको पेरिस्कोप खातामा लग इन गर्नुहोस्।
अन्तमा, प्रोफाइल चयन गर्नुहोस्, कन्फिगरेसन र बन्द सबै उपकरणहरूमा सत्र। अब जब ट्विटर प्रयोगकर्ताले आफ्नो पेरिस्कोप खाताबाट लग आउट गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छ, तब उसको नयाँ मोबाइलमा लग इन गर्ने विकल्प छ।
एक ट्विटर स्ट्रीम सिर्जना गर्नुहोस्
Para एक स्ट्रिम सिर्जना, ट्विटर प्रयोगकर्ताले: प्रसारण ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्, प्रसारण सिर्जना गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्, आवश्यक फाँटहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्: ट्रान्समिशन नाम, वर्ग: कसरी तपाईं आफ्नो प्रसारण वर्णन गर्नुहुन्छ? र स्रोत।
ट्विटर प्रयोगकर्तालाई एक छनौट गर्न आवश्यक पर्दछ विकल्प सुन्न: सार्वजनिक वा निजी; एक तालिका विकल्प छनौट गर्नुहोस्: तुरुन्तै सुरु गर्नुहोस् वा पछि सुरू गर्नुहोस्; उन्नत सेटिंग्स खोल्नुहोस्; खुला सामग्री प्रतिबन्धहरू: समावेश वा बहिष्कार गर्नुहोस्।
भिडियो इम्बेड गर्नुहोस् एन्कोडरबाट स्रोत र जाँच गर्नुहोस् कि पूर्वावलोकन निर्माताले भिडियो देखाउँदछ; सिर्जना प्रसारणमा क्लिक गरेर, ट्विटर प्रयोगकर्तासँग छनौट गर्न विकल्प छ: तुरुन्तै सुरु गर्नुहोस् वा पछि सुरु गर्नुहोस्।
ट्वीटरमा प्रसारण ट्वीट र अन्त्य गर्नुहोस्
ट्विटर प्लेटफर्ममा, प्रयोगकर्तासँग विकल्प छ ट्वीट ब्रोडकास्ट, निम्न प्रक्रियामा भाग लिदै: प्रसारण ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्; अवस्थित प्रसारणमा क्लिक गर्नुहोस्; ट्वीट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं अनलाइन जान तयार हुनुहुन्छ।
सन्दर्भमा एक प्रसारण समाप्त, ट्विटर प्रयोगकर्ताले यो प्रक्रिया अनुसरण गर्नु पर्छ: प्रसारण ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्, अवस्थित ट्रान्समिशनमा क्लिक गर्नुहोस्, प्रसारण पहिचान विन्डोको तल जानुहोस्।
बन्द गर्न, ट्वीटर प्रयोगकर्ता मा क्लिक गर्दछ समाप्त बटन; एक पटक प्रक्रियाको सबै आवश्यकताहरू पूरा भएपछि, यसको प्रसारण ट्वीटरमा सबै ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूको आनन्दका लागि ट्विटर प्लेटफर्ममा पुन: उत्पादन गरिनेछ।
1 मेरो पेरिस्कोप खाताबाट लग आउट गर्नुहोस्
2 एक ट्विटर स्ट्रीम सिर्जना गर्नुहोस्
3 ट्वीटरमा प्रसारण ट्वीट र अन्त्य गर्नुहोस्